နေအိမ်/Windows ကို 10/Windows 10 တွင် setting များကိုစတင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံး
Vangelis3 ။ မေလ 2020
Windows 10 အောက်တွင် အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်လိုပါက၊ သင်သည် များသောအားဖြင့် Windows ဆက်တင်များသို့ သွားရမည်ဖြစ်သည်။ စနစ်ဆက်တင်ကို မတူညီသောအမျိုးအစားများ ခွဲခြားထားသည် ဥပမာ။ B. စနစ်၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကွန်ယက်ကို အင်တာနက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အက်ပ်များ၊ အကောင့်များ၊ အခြားဘာသာစကားများ၊ ဂိမ်းများ၊ ရိုးရှင်းသောအခြေအနေများ၊ ရှာဖွေမှု၊ ကွန်တိန်နာများ၊ ဒေတာကာကွယ်မှု၊ အပ်ဒိတ်များနှင့်လုံခြုံရေး ဤဆောင်းပါး၌ setting ကိုဖွင့်ရန်မည်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုသင်ပြလိုသည်။
Windows 10 တွင် setting ကိုဖွင့်ပါ
1 Windows 10 တွင် setting ကိုဖွင့်ပါ
4 Start menu II
5 Admin menu ပါ
8 Windws Explorer မှ
10 start menu နှင့် taskbar ကိုပင်ထိုးပါ
Windows 10 တွင် setting များကိုသင်ရှာ။ ဖွင့်နိုင်သောကွဲပြားသောနည်းလမ်းများရှိသည်။ Microsoft သည်၎င်းတို့၏ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရန်လက်ရှိလည်ပတ်နေသောစနစ်၌နည်းလမ်းများစွာဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းအချိန်5Minuten
အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့်အသုံးများဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ၎င်းတွင်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းဖြစ်သည် Windows + I ပါ တစ်ချိန်တည်းမှာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပြတင်းပေါက်သည်အလိုအလျောက်ဖွင့်သည် Windows ကို + အီး
သေဆုံး ချိန်ညှိ fအဲဒါကိုလည်းရှာပါ Start menu Windows 10. မှဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ပါ Windows လိုဂို အဲဒါကိုဆက်လုပ်ပါ ဂီယာ။
ငါတို့က start menu ရဲ့အောက်မှာရှိတယ် စာ-အီး setting ကိုရှာပါ။
Admin menu ပါ
နောက် option တစ်ခုမှာ Windows logo ပေါ်တွင်သင် right-click လုပ်သောအခါဖြစ်သည်။ ပြတင်းပေါက်သေးသေးလေးသည် setting အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများဖြင့်ဖွင့်သည်။ keyboard shortcut ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် Windows ကို + X ပုတ်ပါ။
သင်မှတဆင့် setting များကိုပြောင်းနိုင်သည် ရှာဖွေရေးဘား ခေါ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ထိပုတ်ပါ setting များကို Windows 10. ရှာဖွေရေးဘားတန်း၏ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ Settings ရှိရလဒ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက် option တစ်ခုကသင်နှိပ်လျှင်ဖြစ်သည် မိန့်ခွန်းပူဖောင်း click ပါ။ ဒီမှာဖွင့်တယ် အသိပေးချက်များ Windows 10. မှ Windows setting များအပြင် network သို့အမြန် ၀ င်ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် လေယာဉ်ပျံပုံစံ၊ မိုဘိုင်း Hotspotပြီးနောက်၊ တောက်ပမှု၊ မုဒ် အခြားအရာများစွာ
Windws Explorer မှ
File Explorer (သို့) Windows Explorer အတွက်အချက်အောက်တွင်ရှိသည် ဒီ pc နည်းလမ်းကိုလည်းရှာပါ setting များကိုမရ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကွန်ပျူတာအောက်ရှိထိပ်မှာသင်အလိုရှိသောခလုတ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Run window ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းကိုတို့ပါ Windows ကို + R ကို အမိန့်ပေးပါ s- ဆက်တင်များ တစ်ဦး။
start menu နှင့် taskbar ကိုပင်ထိုးပါ
system menu setting များကို start menu နှင့် taskbar တွင်တွဲထားပါ။ အနည်းငယ်ကလစ်ရုံဖြင့် system settings ကို task bar သို့တိုက်ရိုက်ပင်ထိုးနိုင်သည်။
ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ပါ Windows လိုဂို စာရင်းအစီအစဉ်၌ setting ကိုရှာပါ။ ၎င်းကို Right Click နှိပ်ပါ။ ဤနေရာတွင် system settings ကိုတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည် Start menu ဒါမှမဟုတ် အလုပ် ၀ န်ဆောင်မှုpine။
Windows 10 တွင် command prompt ကိုစတင်ပါ - ရွေးချယ်စရာအားလုံး
Windows 10 Defender ကိုပိတ်ပါ
Windows အောက်ရှိ DNS cache ကိုရှင်းပါ
Windows 10 ကို restore point ဖြင့်ပြုပြင်ပါ
Microsoft Cortana ကိုလုံးဝဖြုတ်ပါ
Windows 10 တွင်အချိန်ဇုန်ကိုပြောင်းပါ - ဤတွင်မည်သို့နည်း
Windows 10 သူလျှိုများကိုပိတ်ပါ
setting များကို ပြတင်းပေါက် 10 Windows 10 ဆက်တင်များ windows 10 setting များကိုချိန်ညှိပါ Windows 10 စတင်ချိန်ညှိချက်များ